DEGDEG: Goob uu khudbad ka jeedinayey Kheyre oo bam lagu weeraray. – Kismaayo24 News Agency
by admin 14th September 2019 061
Bamka oo qofkii soo tuuray uu baxsaday islamarkaana aan la garaneyn ayaa la sheegay inuu ku qarxay meel waxyar u jirta halkii uu Kheyre ka waday hadal-jeedinta, sida ay goob-joogeyaal u xaqiijiyeyn Warbaahinta Madaxa Banaan.
Qaraxa bamka ayaa la sheegay in dhaawacyo fudud uu kasoo gaaray qaar ka mid ah ilaalada ra’iisul wasaaraha. Ra’iisul wasaaraha ayaa la sheegay inaan marnaba halis gelin, qaraxana uu ka yara fogaa, balse uu naxay oo uu joojiyey khudbaddii.
SAWIRRO: RW Khayre oo si aan caadi aheyn loogu soo dhoweeyey Magaalada Marko.
DEG DEG: Masuuliyiin Badan oo ka tirsan Maamulka Dagmada Buurdhuubo oo Goordhaw Qarax Xoogan lagu dhaawacay
Dhageyso: Boqor Buurmadow oo ka hadley Shirka Beelaha Habar Jeclo iyo Habar Yoonis iyo Maamulak Somaliland oo.